Xiaomi Redmi Pro bụzi onye ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi Redmi Pro bụ onye ọrụ ugbu a
Villamandos | | Emelitere na 27/07/2016 11:44 | Mobiles, Noticias
Taa na mgbakwunye na Xiaomi Mi Notebook Ikuku, anyị na eze mara na ọhụrụ Xiaomi Redmi Pro, nke a na-enyefe na mmemme a mere n'ụtụtụ a site n'aka ndị na-emepụta China na nke ọzọkwa ọ hapụrụ ihe karịrị otu n'ọnụ ha meghere na ngwaọrụ abụọ na-atọ ụtọ nke ukwuu, yana ọnụahịa nke na-etinye ma ohere ọ bụla na akpa ọ bụla na onye ọrụ.
Ngwaọrụ Xiaomi ọhụrụ a, nke anyị ahụlarị n'oge dị iche iche na onyonyo enyopụtara, na-apụta maka igwefoto ya abụọ na azụ ya na ngwugwu ọla ya nke na-etinye ya n'ọkwa nke njedebe ọ bụla nke a na-akpọ oke njedebe.
Site n’isiokwu a anyị ga-amata ozi niile ewepụtara n’ụtụtụ a na mmemme nke Xiaomi mere. O di nwute na otu ozi ojoo, ma obu na obughi ihe nile gha adi nma, Redmi Pro a agaghị erute ahịa karịa ndị China ọ dịkarịa ala ugbu a, ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ gọọmentị, ihe na-eme ugbua na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ndị na-emepụta China.
Nke mbụ, anyị ga-enyocha isi atụmatụ na nkọwa nke Xiaomi Redmi Pro a;
N'ihi njirimara na njirimara ndị a, n'ezie ole na ole n'ime gị nwere obi abụọ na anyị na-eche ihu karịa ngwaọrụ mkpanaka na-atọ ụtọ yana na ekele maka ọnụ ahịa ya n'oge na-adịghị anya ọ ga-abụ otu n'ime nnukwu kpakpando nke asọmpi telephony ahịa mobile.
1 Igwefoto abuo, ihe ngosi ohuru nke Xiaomi
2 Arụ ọrụ na atụmatụ nke Xiaomi Redmi Pro
Igwefoto abuo, ihe ngosi ohuru nke Xiaomi
Xiaomi Redmi Pro nwere nnukwu igwefoto ya na igwefoto abuo nke anyi huru ugbua na ngwaọrụ mkpanaka ndi ozo di na ahia. Nke a nwere ihe mmetụta abụọ dị iche iche, otu n’ime 13 megapixels nke Sony mere na nke ọzọ bu akara Samsung, nke nwere 5 megapixels. na na dị ka Chinese emeputa ga-ekwe ka weghara omimi na contours.
Otu n'ime uru igwefoto ọhụrụ a bụ Ohere inweta foto na oghere f / 0.95 yana lekwasị anya na njikarịcha agba, ohere nke itinye ihe bokeh n'ọrụ n'oge na n'ozuzu ohere nke iwe ihe oyiyi nke oke ogo na nkọwa, dị ka nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdụ ọ bụla ọzọ dị n'ahịa.
Ihe onyonyo nke Xiaomi gosiputara na ihe omume a bu ezigbo oke, obu ezie na anyi nile mara n’udi ihe a, ihe egosiputara bu onyogho zuru oke ma o bughi ufodu nke anara na onodu di mgbagwoju anya, dika ima atu.
Arụ ọrụ na atụmatụ nke Xiaomi Redmi Pro
Xiaomi egosiputa taa Redmi Pro ohuru na uzo abuo di iche iche, nke gha enye anyi nnukwu oru na okwu abuo, nke nwekwara ihe omuma nke Mediatek. Helio X20 maka ụdị kachasị (3 GB nke Ram na 32 Gb nke nchekwa dị n'ime) na Helio X25 maka ụdị abụọ kachasị elu.
Ndị nhazi abụọ ahụ, ọkachasị na nke nke na-arịgo ọnụ arụmọrụ dị elu, tụfuru ntakịrị ala na Qualcomm Snapdragon 820 a ma ama, mana ọ na-aga n'ihu na-enye anyị ezigbo arụmọrụ, yana enweghị obi abụọ anyị agaghị echefu ọnụahịa nke smartphone ọhụrụ a ga-akụ n'ahịa na nke anyị ga-ahụ na-esote.
Banyere nchekwa dị n'ime, ahịa ahụ ga-abịa ụdị atọ dị iche iche nke 32, 64 na 128 GB nke nchekwa, nke na ikpe ọ bụla anyị nwere ike ịgbasa ya site na iji kaadi microSD. Xiaomi anaghị etinye oke na nchekwa na nke a ma ọ bụ na nke ọ bụla na nke a doro anya na ọ bụ nnukwu akụkọ maka ndị ọrụ niile.
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu okwu banyere batrị nke nwere 4.050 mAh na na dịka ndị na-emepụta China ga-enye anyị nnwere onwe dị ukwuu, nke anyị ga-enyocha ozugbo Redmi Pro dị na ahịa, ihe ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Ọzọkwa, Xiaomi ejisiela ike mepee ngwaọrụ mkpanaka na-atọ ụtọ, nke nwere ike ịnya isi maka ọtụtụ ihe, mana karịa ọnụahịa ya niile na ọbịbịa ya n'ahịa ga-adị ihe ọ bụla. Ma nke ahụ bụ Nke a Xiaomi Redmi Pro ga-aga ire na China na August 6.
N'oge a amabeghị ma ọ bụrụ na ngwaọrụ mkpanaka a ga-abata na mba ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nchebe zuru oke na Spain na mba ndị ọzọ dị na Europe, anyị ga-enweta ya site na ndị ọzọ ma ọ bụ site na ụlọ ahịa ndị China na-enwe ihe egwu dị na ya.
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ọnụahịa nke ụdị dị iche iche nke Rredmi Pro nke ga-akụ ahịa;
Redmi Pro na 32 GB nke nchekwa na Helio X20: 204 euro
Redmi Pro na 64 GB nke nchekwa na Helio X25: 231 euro
Redmi Pro na 128 GB nke nchekwa, 4 GB nke Ram na Helio X25: 272 euro
N'ihi ọnụahịa ndị a nke a ga - eji ahịa Xiaomi ọhụrụ a na ahịa ndị China (a ga - ahụ ya na ọnụ ahịa ọ ga - eru Europe na Spain), obi abụọ adịghị ya na anyị na - eche ihu karịa ọnụ na - atọ ụtọ na nke ahụ mkpuchi ga-enye ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ Samsung, Huawei ma ọ bụ LG.
Kedu ihe ị chere gbasara Xiaomi Redmi Pro ọhụrụ a?. Gwa anyị uche gị na echiche gị banyere ọdụ a na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na otu netwọkụ mmekọrịta anyị nọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Xiaomi Redmi Pro bụ onye ọrụ ugbu a
Intex Aqua Fish dị ugbu a; ekwentị mbụ nwere Sailfish OS dị ugbu a
Xiaomi na-eme onye ọrụ laptọọpụ mbụ ya, ka anyị nabata Xiaomi Mi Notebook Air